Ihe omimi: Ndị na-enyocha ọdịnaya. Otu esi achọta onye na-anapu ihe omuma gi
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ede blọgụ ma ọ bụ onye edemede ọdịnaya, ọ nwere ike ịmara ihe niile banyere ihe gbasara ọdịnaya. Rịba ama na ndị na-enyocha ọdịnaya nwere ike iṅomi ma ọ bụ zoo ọdịnaya weebụ gị maka blọọgụ onwe ha n'enweghị ikike ọbụla. Ụfọdụ n'ime ndị na-enyocha ọdịnaya ahụ na-edetuo ma tinye akwụkwọ blog gị mgbe niile, ebe ndị ọzọ na-eji ihe omume akpaghị aka iji nweta ọdịnaya site na ndepụta RSS ma na-ebipụta ya na weebụsaịtị nke aka ha. N'ebe a, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi achọpụta onye na-ezu ohi ọdịnaya weebụ gị na ihe ndị ị ga-eme megide ha - web hosting peru.
Otu esi chọpụta na saịtị gị na-efesa:
Ọ gwụla ma ịchọọ maka akara ngosi gị na Yahoo, Bing ma ọ bụ Google, ị gaghị enwe ike ịdebe ebe nrụọrụ weebụ na-ezu ohi ọdịnaya gị na mgbe nile. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịma banyere ndị spam igwe ma ọ bụ ndị omempụ, ị nwere ike ịnwale ọ bụla n'ime ụzọ ndị a.
Ọ bụ ụzọ dị mfe na dị mfe ịchọta onye na-ezu ohi gị ọdịnaya na ịntanetị.Usoro a na-enye gị ohere ịbanye na URL nke ọdịnaya weebụ gị ma chọta akwụkwọ ya na Web Wide Web. Ị nwere ike iji nsụgharị ya n'efu na nhọrọ nwere oke ma ọ bụ ndepụta nke mbido nke na-enye gị ohere ịlele ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku peeji nke weebụ maka ego ole na ole.
I nwekwara ike ịnwale usoro nchịkọta akụkọ nke saịtị WordPress gị iji chọpụta ma kwatuo saịtị ndị na-ezuru ihe dị n'ime ya kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-eji Akismet, ọtụtụ n'ime trackbacks ga-egosi na nchekwa gị spam. Isi igodo ịchọta na ịchọta nzaghachi bụ itinye njikọ nke post gị na ederede arịlịka dị ukwuu. Njikọ dị n'ime na mpụga dị mkpa maka njikarịcha njirimara gị.
3. Ngwaọrụ Webmaster:
Ụzọ ọzọ ịchọta scrapers ọdịnaya bụ site na iji Ngwaọrụ Webmaster. Gaa na Ntanetị> Njikọ nke akaụntụ Google Analytics ma pịa na ibe nke Ụlọ Ederede. A ga - egosiputa ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla nke na - ejikọta gị na saịtị a. Iji chọta njikọ nke aka gị na saịtị a, ị ghaghị ịpị na ngalaba ahụ ma chọpụta nkọwa nke isiokwu nke ebe nrụọrụ weebụ gị ezuola oke. N'ebe a, ị ga-enwe ike ịhụ otú ha si eji nlezianya na-edegharị ma na-ezipụ utu aha na ọdịnaya gị kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ịnwụbeghị mgbe niile ma na-achọ ka ị kwado ihe ndị ị na-ede ma ọ bụ isiokwu ndị ọzọ na saịtị ndị ọzọ, ị ghaghị ịmepụta Alerts Google site na iji nkata ziri ezi nke isiokwu nke isiokwu gị tinye ya na akara ngosi.
Ọ bụrụ na i mepụtara saịtị WordPress, ị ga - anwale ihe mgbakwunye ụkwụ RSS. Ọ na-ahapụ ndị ọrụ ka ha dee ederede gị na omenala gị ma ọ bụ n'elu nke ọdịnaya ndepụta RSS. Ma ọ bụrụ na ịnweghị saịtị WordPress, ị ga-agụnye naanị nkọwa dị mkpirikpi ma ọ bụ ọkwa na ala ma ọ bụ n'elu nke ọdịnaya gị na ọ nwere ozi yiri ya ma kwesiri ka edegharịa ya nke ọma.
Otu esi egbochi nkwụsịtụ ọdịnaya?
Ọ bụrụ na ịnweghị ka onye ọ bụla zuo ohi ma ọ bụ detuo ọdịnaya weebụ gị, ị ga-ewere ihe ụfọdụ. Nke mbụ, ị ga-akpọtụrụ onye na-elekọta saịtị ahụ ma jụọ ya / weghaara ibe weebụ ebe a na-edepụta ọdịnaya weebụ gị. I nwere ike ime ka o kwenye iji wepụ isiokwu ndị ahụ ozugbo.
Ọ bụrụ na enweghị ụzọ ịkpọtụrụ onye nchịkwa, ị ga-eme onye na-achọ onye ọ bụ nke nwere saịtị a ma ọ bụ aha ngalaba. Ọ bụrụ na edeghị ya aha naanị, ị ga-ahụ adreesị ozi-e nke mfe. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ GoDaddy ma ọ bụ HostGator ma mee ka ha chee na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ aha ngalaba ahụ na-agbagha na ịzụta ihe weebụ gị ma ọ bụrụ na ewepụrụ ma ọ bụ kwụsịtụ ya ozugbo.
Ikpeazụ ma ọbụlagodi, ị nwere ike ịga na DMCA. Ị ga-eji ọrụ iwepụta ya iji nweta foto ndị nwebiisinka gị, vidiyo, ebe nrụọrụ weebụ na ọdịnaya wepụrụ. E nwere ụfọdụ WordPress plugins na-ejikọta badges badges DMCA, ma ị nwere ike iwunye ya na ebe nrụọrụ weebụ gị ịdọ aka ná ntị ndị nwere ike mbanye anataghị ikike na ndị ohi.